Byu Har (ဗျူဟာ) - Boe Daw Byu Har (ဘိုးတော်ဗျူဟာ) [2016 Album] (320Kbps!) - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Album Byu Har High Quality Nine One ကြက်ဖ ဗျူဟာ နိုင်းဝမ်း Byu Har (ဗျူဟာ) - Boe Daw Byu Har (ဘိုးတော်ဗျူဟာ) [2016 Album] (320Kbps!)
Byu Har (ဗျူဟာ) - Boe Daw Byu Har (ဘိုးတော်ဗျူဟာ) [2016 Album] (320Kbps!)
3:21:00 PM 320 Kbps!, Album, Byu Har, High Quality, Nine One, ကြက်ဖ, ဗျူဟာ, နိုင်းဝမ်း,
တောရွာ [Feat. ကြက်ဖ]
သမီးရည်းစားပြဿ နာ [Feat. စုစန္ဒီထွန်း]
ရောင်စုံကာလာ [Feat. ရာဇ၀င်]
Night Out [Feat. Nine One]
လွတ်(စ်) [Feat. နေမ၀င်]
လူတော်လူကောင်း [Feat. ထူးသစ်]
ကဲ [Feat. ခင်ဆုရှင်]
ဘိုးတော် ဗျူ ဟာ
Everything အေးအေးဆေးဆေး [Feat. နေမ၀င်]
နှိပ်ပါ ! :)
Tags # 320 Kbps! # Album # Byu Har # High Quality # Nine One # ကြက်ဖ # ဗျူဟာ # နိုင်းဝမ်း
Labels: 320 Kbps!, Album, Byu Har, High Quality, Nine One, ကြက်ဖ, ဗျူဟာ, နိုင်းဝမ်း
Smart Electronic Soft (NM) September 12, 2016 at 4:22 AM